Filoha Ravalomanana : efa fiainany isan’andro ny fiangonana sy ny fivavahana | Ny Valosoa Vaovao
Filoha Ravalomanana : efa fiainany isan’andro ny fiangonana sy ny fivavahana
Misy tato ho ato ny sokajin’olona miteny amin’ny gazety fa tsy tokony atao fitaovana politika ny fivavahana . Fomba fijery avy ety ivelany izany . Malalaka koa ny rehetra amin’ny fanehoan-kevitra . Raha ny filoha Marc Ravalomanana no tian’ny sasany resahana amin’izany dia diso be ny filazana fa ampiasainy atao fitaovana politika ny Fiangonana . Tsotra ny antony satria izany Marc Ravalomanana izany dia efa olon’ny Fiangonana hatramin’izay nahaolona azy ary tsy vitan’ny hoe Kristianina fotsiny fa mandray andraikitra indrindra eo anivon’ny sahan’ny Fjkm . Efa fiainany isan’andro ny miangona any am-piangonana sy manatrika ny fotoam-bavaka manokana izay tsy teo anivon’ny Fjkm ihany fa tamin’ny Fiangonana hafa ihany koa toy ny Loterana sy ny Katolika Romanina, sy ny hafa,… ohatra. Izy rahateo nipoitra dia tamin’ny fianakaviana Kristianina sady olon’ny Finoana ka raha manatrika Fotoam-bavaka ve ny Filoha Marc Ravalomanana izay nifanesisesy tato ho ato dia lazaina fa manao fitaovana politika ny Fiangonana? Tsia avy hatrany ny valiny satria ny olona miteny an’izany dia mahatsapa tsara fa manana ny maha izy azy izany Marc Ravalomanana izany .
Marary mantsy ny andoha sy ny kibon’ny sasany rehefa mahita ny vahoaka an’Andriamanitra mirohotra mitafa amin’ny Filoha Marc Ravalomanana amin’ireny Fotoam-pivavahana ireny . Ka ny olona tsinona tsy azo sakanana ka ! Ny fifankatiavana rahateo no hevi-dehibe voizina any am-piangonana ka inona no olana? Mifankatiava ianareo hoy ny Tompo ! Tsy manao fitaovana politika ny Fiangonana ny Filoha Marc Ravalomanana araka ny nambara teo satria ny fitenenana izany dia manambany ny Fiangonana . Rehefa miditra ao amin’ny Tranon’Andriamanitra ny olona rehetra dia mitovy daholo satria samy mpanota . Aza variana mitsikera ny Filoha Marc Ravalomanana ianareo mpanenjika azy ireo fa mba mandehana miangona any am-piangonana tahaka azy dia henoy tsara ny Toriteny . Raha manatrika Fotoam-bavaka ohatra ny Filoha Hery Rajaonarimampianina dia azy ny azy , tsy misy afaka hitsara azy na hanakana azy . Fa ankoatra izay dia misy ny milaza fa tsy tokony miditra amin’ny raharaha politika ny Fiangonana , ny Filoha Hery Rajaonarimampianina rahateo nilaza tany Antsiranana fa aleo hono ny raharaham-piangonana an’ny Filoha Ravalomanana fa ny raharaham-panjakana azy Rajaonarimampianina . Ny azo ambara dia izao : tsy afaka hitazam-potsiny ny Fiangonana raha mahita ny vahoaka fadiranovana sy mahantra noho ny tsindry ataon’ny sasany sy ny tsy rariny , tsy maintsy miteny ny tsy mety amin’ny fitantanana ny firenena ny Fiangonana ary tena andraikiny izany fa tsy araka ny eritreretin’ny sasany . Sao dia adinon’ny sasany fa Jesoa mihitsy no niteny hoe : Omeo hanina ny olona sy ny hoe : Fahano ary ny ondriko! Raha izany dia Jesoa Kristy mihitsy no manao politika, izay politikan’ny fampanjakana ny Fahamarinana sy tsy hahazoan’ny ratsy hanjaka eto amin’ity tany ity . Sao koa tsy fantatry ny sasany fa ny Papa izay Lehiben’ny Fiangonana Katolika eran-tany, izay dimbin’i Masindahy Piera na Petera dia Filoham-pirenena ao amin’ny fanjakan’i Vatican , manana Ambasadaoro , manana Ministra , ny Nonce Apostolique tompoko dia solontenan’ny Papa eto Madagasikara , ka maninona raha tenenina ny Papa sy ny Katolika hoe : ajanony daholo izany rehetra izany fa manao politika ! Mila mandalina tsara ireny mpitsikera ny Filoha Ravalomanana sy ny Tim ireny fa lasa mampihomehy sy mampalahelo satria fankahalana no mibaiko ka lasa miteniteny foana . Mivavaka ho azy ireny no adidintsika e ! Sa ahoana hoy ianao ?